INFO CLOSER. Line Renaud isbitaal ku yaal magaalada Paris ka dib markii istaroog ah - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE INFO CLOSER. Line Renaud isbitaal ku yaal magaalada Paris kadib markii uu istaroog ku dhacay
Walbahaarka qaraabadaada line Renaud. Wadashaqeyn ka mid ahAFP ayaa shaaca ka qaaday bogga Twitter-ka in ay isbitaal la dhigtay ka dib markii ay ku dhacday gaajo xun ee beerteeda, iyada oo la ciyaareysa eyda. Sida laga soo xigtay macluumaadkayaga u dhaw, caawinaad ayaa u timid guriga heesaha Rueil Malmaison, Arbacadii 10 Abriil ka dib line Renaud wuxuu lahaa istaroog. tan iyo markaas, line Renaud waxaa isbitaalka lagu dhigaa Isbitaalka Paris, halkaas oo ay ku nasaneyso oo ay ku soo celiso awoodeeda. Meeshaas, waxay tixgelin kartaa taageerada qaraabadeeda, kuwaas oo horeyba u yimid inay soo booqdaan qolkeeda isbitaalka.
Waa in la sheegaa in line Renaud ayaa mashquul badanaa bilihii dhowaa. Dhowr maalmood ka hor, waxay mar kale isku dayday habeenkii Paris iyo telefishinnadeeda si ay uga hadlaan Sidaction, kuwaas oo ay tahay madaxweyne ku-xigeen. Dagaal udhaxeeya wadankeeda muddo sanado ah, laakiin waxay ka fekereysaa in ay waqti gaaban u dirto. "Waxaan sii wadi doonaa inta aan awood u leeyahay", ayaa qiray line Renaud à Magazine TV horraantii Abriil, ka hor intaanay ku qanacsanayn inay u malaynayso inuu ku sii waarayo: "Guddiga xiga, waxaan u sheegi doonaa in ugu yaraan qof u baahan yahay in la diyaariyo. Waxay qaadataa qof joogto ah oo doonaya inuu la dagaalamo. Waxaan ka fekerayaa Jean-Paul Gaultier, dabcan! "
Khadka RENAUD wuxuu jabsaday anqawga xilliga dayrta xun, oo la ciyaaraya eydiisa. Dhaqdhaqaaqa ayaa isbitaal la dhigay dhowr maalmood, laakiin wax waliba waa ay fiican yihiin, sida uu qabo.
Sanadihii 90, line Renaud ku noolaa a dhammaadka sanadka 2018 gaar ahaan naxariis. A Paris Matchturjubaanka "Qalinkayga Canada" ayaa sheegay in uu ka lumay labo ka mid ah xayawaankiisa toddobaadkii, intii lagu jiray bishii December. "Todobaadkii hore, waxaan ka lumay labadayda eeyda saddex maalmood," ayay tidhi. Laba eey ayaa loo yaqaan "Voyou iyo Câline" iyo taas oo matalaysa lumis weyn oo iyada.
© Pierre Perusseau / Wanaagsanaanta
Exclusive - Line Renaud - Qorista bandhigga "40 sano ee Starmania" xiddigaha heesaa p
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.closermag.fr/people/info-closer-line-renaud-hospitalisee-a-paris-apres-un-avc-956547